kaongresy amerikanina ny talata lasa teo. Tsy nanisy resaka mikasika ny fanonganana azy ny alatsinainy lasa teo moa izy. Mizarazara ny kilasy politika any Etazonia ary somary nafampana ny fiatrehana ny lahateniny ny “etat de l`Union”. Mialoha ny lahateniny dia nodinganin`i Donald Trump ny tanan`ny filohan’ny kongresy Nancy Pelosi. Taorian`io lahateny io, norovitin`ity loholona ity teo imason`ny rehetra ny dika mitovy ny kabarin`i Trump. Manomboka mavaivay ny tontolo politika any Etazonia. Maro ireo mpikambana eo anivon`ny kaongresy amerikanina no nisafidy tsy hanotrona ny filoha Trump tamin`io andro io. Tsy ara-dalàna ho azy ireo izany filoham-pirenena manitsakitsaka lalàna sy lalàmpanorenana izany.